अँध्यारो कोठाका स्वार्थ समूहबाट खाएको धो’का कम्तीमा प्रचण्ड, वामदेव र माधवले नभूलून् – रामकुमारी झाँक्री ! – yuwa Awaj
अँध्यारो कोठाका स्वार्थ समूहबाट खाएको धो’का कम्तीमा प्रचण्ड, वामदेव र माधवले नभूलून् – रामकुमारी झाँक्री !
मंग्सिर ३, २०७७ बुधबार 1
काठमाडौं, मंसिर ३/सत्तारूढ दल नेकपाकी ने\_तृ रामकुमारी झाँ’क्रीले पार्टीलाई विभाजन हुनबाट जोगाउन नेताहरूसँग आग्रह गरेकी छन्।
बुधबार (आज) का लागि तोकिएको नेकपा सचिवालय बैठक बस्ने किन भनेर नबस्ने अन्योल भइरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमार्फत ने’तृ झाँ’क्रीले नेताहरूलाई खबर’दारी गरेकी हुन्।
‘बैठक, विधि छाडेर अँध्या’रो कोठाका स्वा’र्थ समूहसँग गरेको ले’नदेनमा खाएको धो’का कम्तीमा कम’रेड प्रचण्ड, कम’रेड वामदेव र क’मरेड माधवले नभूलून्।’
समीकरण ‘भत्काउने’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास कति सफल ?
काठमाडौँ : ग’म्भीर आ’रोप र अप्र’त्यक्षरुपमा राजीनामाकै माग गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेपछि द’बाबमा आएका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको पछिल्लो समीकरण भत्का’उने कोसिस जारी राखेका छन् ।
मंगलबार साँझसम्म आन्तरिक समीकरण भत्काउने उनको प्रयास सफल भएको स्पष्ट संकेत भने आइसकेको छैन । बरु, पार्टीका दुई अध्यक्षबीच लिखितरुपमै आरोप–प्रत्यारोप र सवाल–जवाफ भएपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा झनझन् क’ठोर धु’व्रीकरण बन्दै गएको छ ।
आफ्नाविरु’द्ध आएको प्रस्तावको पक्षमा सचिवालयका बहुमत सदस्य उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समीकरण भत्काउनका लागि शीर्ष नेताहरुसँग भेट, पूर्व माओवादी समूहका नेताहरुसँग छलफल, आफ्नै समूहका नेताहरुसँग नियमित छलफल र राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेका छन् । एकातिर आन्तरिक समीकरणमा फेरबदलका लागि कोसिस गरिरहेका प्रधानमन्त्री
ओलीले अर्कोतिर बुधबार बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगनका लागि प्रस्ताव फिर्ताको अडान राखेका छन् । विगतमा जस्तै राष्ट्रपतिसँग लगातार परामर्श गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विपक्षमा रहेका नेतामाथि मनोवैज्ञानिक द’बाब बनाउने प्रयास पनि गरेका छन् ।
पार्टीभित्र दबा’बमा आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमबारे छलफल गर्न अध्यक्ष दाहाल मंगलबार साँझ राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका थिए । ओली र
दाहालबीच वि’वाद हुँदा मिलाउनका लागि राष्ट्रपतिले समेत भूमिका खेलेको आ’रोप लाग्दै आएको छ । पार्टी सचिवालयमा दाहालको एकल राजनीतिक प्रस्ताव पेश भएपछि ओलीले आइतबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर फकाउने प्रयास गरेका थिए । उनले दुवै नेतालाई आफूसँग मिलेर जान आग्रह पनि गरेका थिए । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
Prevप्रभुको लिलामै टिकिरहेको नेकपा – फेरि भयो चिनियाँ राजदूतको इन्ट्री !
Nextज्वाला सङ्ग्रौला र रबि लामिछानेको देशभक्त युवालाई एकजुट हुन आ’ह्वान…हेर्नुहोस् ।
टिकटकमा भाइरल बन्दै रमेश–कल्पनाको जोडी, विवाह बारे रमेश यसो भन्छन…हेर्नुहोस् ।
आमाको कि’रिया वसेका निष्ठा’वान छोरीहरु – सम्मानको लागि सक्दो सेयर गरौं।
मलेसियामा अवैधानिक विदेशि कामदारको निम्ति ‘रिहाइरीङ’ खुल्ने…हेर्नुहोस् ।
नजिर हुसेनले लेखे मार्मिक पत्र : बिहेमा श्रिकृष्ण श्रेष्ठ आउन मिल्ने भए यसो भन्थे होला…पूरा पढ्नुहोस् ।
नायिका करिष्मा भन्छिन्; ‘क्रिस्चियनले हाम्रो निधारमा लगाउने रातो गौरवको टिकालाइ घृ’णा गर्यो (42)
धर्मशास्त्रका अनुसार आइतबार सूर्य देवताको पुजा गर्दा मिल्नेछ खुशी (23)
काठमाडौँ महानगरभित्र रोकिएको कोभिडविरुद्धको खोप भोलिदेखि (16)
लुम्बिनीमा नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न जसपाको ह्वीप (12)
१.	नायिका करिष्मा भन्छिन्; ‘क्रिस्चियनले हाम्रो निधारमा लगाउने रातो गौरवको टिकालाइ घृ’णा गर्यो (42)
२.	धर्मशास्त्रका अनुसार आइतबार सूर्य देवताको पुजा गर्दा मिल्नेछ खुशी (23)
३.	काठमाडौँ महानगरभित्र रोकिएको कोभिडविरुद्धको खोप भोलिदेखि (16)
७.	लुम्बिनीमा नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मतदान गर्न जसपाको ह्वीप (12)